Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir oo ka baaqsaday safar uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir oo ka baaqsaday safar uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho
Madaxweynaha dalka Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa la sheegay inuu ka cudur-daartay safar lagu waday inuu ku yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, si uu uga qeyb galo shirka urur goboleedka IGAD oo lafilayo inuu isbuucaan gudihiisa halkaasi ka furmo.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in baaqashada safarka madaxweyne Bashiir ay timid kadib markii uu cabsi ka muujiyay in la xiro hadii uu yimaado magaalada Muqdisho, maadaama ay raadinayso maxkamada dambiyada caalamiga ah ee ICC.
Shirka dhawaan ka furmi doono magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu wadaa inay ka qeyb galaan madaxweynayaal ay ka mid-yihiin madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kegame, madaxweynaha Kenyan Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana shirkaasi la doonayaa in looga wada xaajoodo arrimo ay ka mid yihiin ammaanka iyo sidoo kale arrimo kale oo ku saabsan qaarada Afrika.
Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa sheegay inuu Muqdisho usoo diri doono ku-xigeenkiisa, si uu uga qeyb galo shir madaxeedka dhawaan ka furmi doonno halkaasi, maadaama ay isaga raadinayso maxkamada ICC islamarkaana ay suurto-gal tahay in la xiro markii uu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta Talaadada ee soo socota oo ay taariikhdu ku beegan tahay 13-ka bishaan September ayaa la filayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka furmo shir madaxeedka wadamadda ku bahoobay urur goboleedka IGAD, waxaana ammaanka magaalada Muqdisho uu yahay mid aad loo adkeeyay.